27 hadiyado aad u fiican saaxiib sanadka cusub
Maxaa la siinayaa Sannadka Cusub saaxiibka aan ka qaybgelin taleefannada casriga ah
Daboolka leh daabacaadda sanadka cusub, qoraal qosol leh ama qaab aan caadi ahayn oo aan la taaban karin, doorasho kasta ayaa noqon doonta hadiyad wanaagsan sanadka cusub. Haddii moodooyinka caadiga ah ay u muuqdaan kuwo caajis ah, u fiirso kiisaska leh qaybo loogu talagalay kaararka bangiga, baytari ama silsilado kuu oggolaanaya inaad u qaadato casrigaaga sida boorsada.
Kiis batari ah oo loogu talagalay iPhone 11 Pro Max, 10,990 rubles →
Kiisaska Kirismaska ​​​​ee iPhone ka AliExpress, laga bilaabo 63 rubles →
Popsocket waxay kaa caawin doontaa inaad si habboon u isticmaasho casrigaaga mana u oggolaan doonto inuu ka dhaco gacmahaaga. Iyo qalabku wuxuu sidoo kale u adeegi doonaa nooc ka mid ah istaagida. Marka la soo koobo, shaygu waa wax la taaban karo oo cajiib ah.
Wareegyo wareeg ah oo leh marmarka laga sameeyay AliExpress, 97 rubles →
Popsocket ee qaabka avokado ka ilikegift, 145 rubles →
Hadyad ahaan, waxaad tixgelin kartaa moodooyinka loogu talagalay isticmaalka guriga iyo qalabyada baabuurka. Kuwii hore ayaa inta badan lagu qalabeeyaa ku-xidhka cidhifka miiska, kan dambe, oo leh koobabka nuugista ee lagu hagaajinayo muraayadda hore ama fiilooyinka la geliyo weelka leexiyaha.
Haysta magnetka ee baabuur ka timid Baseus, 498 rubles →
Haysta ku lifaaqan miiska sare ee AliExpress, 652 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiibka qadariya raaxada guriga
Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya in lagu qurxiyo guriga sanadka cusub: xitaa maalinta ugu badan ee caadiga ah, garlandku wuxuu buuxin doonaa qolka iftiinka jilicsan wuxuuna ku dari doonaa raaxada.
Garland oo wata toosh ka yimid Neon-night, 255 rubles →
Garland oo wata buufinno ka yimid Neon-night, 605 rubles →
2. Iftiinka udgoonka iyo saliidaha
Nalalka udgoonka ayaa qolka ku dabooli doona caraf udgoon waxayna kaa caawin doontaa inaad nasato ka dib maalin adag. Ku darida weyn ee hadiyaddu waxay noqon doontaa saliid saliid leh oo leh ur kala duwan si saaxiibkaa uu isla markiiba u qadariyo hadiyadda.
Nalalka caraf udgoon ee ku dul taagan biraha AliExpress, 1 153 rubles →
Xooga saara nalka udgoonka Sandal iyo bergamot oo laga keenay Millefiori Milano, 1 190 rubles →
Isku darka kicinta saliidaha ee Mild By Nature, 720 rubles →
3. Tirooyinka asalka ah
Sawirro qurux badan ayaa ku faani doona meel shelf ama miiska waxayna si fiican u kala duwanaan doonaan gudaha. Oo haddii aad rabto inaad hadiyad ka dhigto mid shaqaynaysa, dooro jaantusyada casrigaaga, qalabka xafiisyada ama dahabka.
Figurine qaab cirbixiyeen ah oo u taagan taleefoonka casriga ah ee AliExpress, laga bilaabo 920 rubles →
Qayb ka mid ah saddex sawir – waxay u taagan tahay khamriga, muraayadaha iyo muraayadda AliExpress, 5 471 rubles →
4. Dharka guriga
Markaad dooranayso hadiyad, fiiro gaar ah u yeelo midabada: waxa fiican inaad doorato wax dhalaalaya si aad midab ugu darto maalmaha shaqada ee jiilaalka. Ha ilaawin inaad hubiso jaantuska cabbirka si aad u hubiso in suudhku si fiican ugu habboon yahay.
Suudhka jaalaha ah ee Agape, 2,390 rubles →
Suudhka guriga oo ka samaysan dhar feeraha laga sameeyay Asos Design, 2 890 rubles →
Suudhka guriga ee qafis leh AliExpress, laga bilaabo 1 209 rubles →
5. Dubiyaal badan
Waad ku mahadsan tahay daanadaha la isweydaarsan karo, hal qalab ayaa bedelaya birta waffle, solay, saanwij sameeye iyo qalab kale oo badan. Dubi-dubiyaasha badan ayaa ku habboon in la kaydiyo, si fudud loo dhaqo oo loo isticmaalo, waxaad ku karin kartaa suxuun cusub oo xiiso leh xitaa maalin kasta.
Dubi-dubiyaal badan oo leh saddex qaybood oo la bedeli karo oo ka socda Redmond, 4 490 rubles →
Dubi-dubiyaal badan oo leh afar qaybood oo laga saari karo oo laga soo saaray Redmond, 6 390 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiibka wax badan ka shaqeeya
1. Koofida duugista
Daboolka duugista ee kursiga ayaa kaa caawin doona inaad wax yar iska bixiso oo aad daalka ka saarto adigoon joojin shaqadaada. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba xafiiska iyo kursiga baabuurka. Qaar ka mid ah moodooyinka koofiyadaha ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa kuleylka, taas oo si gaar ah faa'iido u yeelan doonta xilliga jiilaalka.
Koofiyadda duugista kuleylka leh ee Medica US, 4 900 rubles →
Daboolka duugista ee baabuur leh AliExpress, 1,075 rubles →
2. Hammock ee lugaha
Maqaarka ayaa kaa caawin doona inaad ka takhalusto daalka iyo bararka lugaha, hadiyad weyn oo loogu talagalay kuwa waqti badan ku qaata miiska miiska.
Hammock cagaha leh AliExpress, 758 rubles →
Roog leh daabac aan caadi ahayn, fikrad wanaagsan oo loogu talagalay hadiyadda sanadka cusub ee saaxiibka. Laakin nooc aad u horumarsan oo leh kuleyliyaha ama moduleka dallacaadda bilaa-waayirka ah ee ku dhex jira ayaa laga yaabaa in uu noqdo mid aad waxtar u leh.
Mouse pad oo leh dallacaadda wireless-ka ee AliExpress, 2 332 rubles →
Kuleylka jiirka ee AliExpress, 1 259 rubles →
4. Labtop-ka istaagga
Joogitaanka caadiga ah wuxuu wanaajin doonaa qaboojinta buug-yarahaaga wuxuuna wanaajin doonaa khibradda wax qorida. Haddii taasi ku filnayn, tixgeli dekedaha USB, sanduuqyada beddelka yar, iyo in ka badan sida hadiyad sanadka cusub ee saaxiibkaa.
Laptop-ka la laaban karo wuxuu ka taagan yahay UBR, 1,089 rubles →
Laabtoobku wuxuu ku taagan yahay dekedaha USB ee Baseus, 4 290 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiibka jecel qalabka casriga ah
1. Hard adag oo dibadda ah
Ku kaydi sawirro badan oo fasax ah, kaydi filimada iyo ciyaaraha aad jeceshahay, samee nuqullo kayd ah oo xog ah, darawal adag oo dibadda ah oo cajiib ah ayaa ku habboon dhammaan ujeedooyinkan. Xawaaraha sare ee akhriska ayaa hubin doona waxqabadka ugu sarreeya.
Dibadda SSD-drive 1 TB ka Seagate, 13 399 rubles →
Hard adag oo dibadda ah oo leh USB 3.0 5 TB Seagate, 9 689 rubles →
Naqshad ku jirta naqshad fudud ama daabac qurux badan, bangi koronto oo fudud ama qalab leh fiilooyinka la dhisay, way adkaan kartaa in la doorto mid. Laakiin hadiyadda faa'iido leh ee noocan oo kale ah ayaa hubaal ka farxin doonta saaxiibtaada waxayna hubaal ahaan u iman doontaa mustaqbalka.
Batari dibadda ah Redmi Power Bank 20,000 mAh oo leh laba dekedood oo si degdeg ah Xiaomi uga dallacaadda AliExpress, 1,686 rubles →
Batari dibadda ah Ambilight QC 20,000 mAh oo leh saddex dekedood iyo dallacaadda degdegga ah ee Baseus, 2,990 rubles →
3. kamarad degdeg ah
Iyada oo la kaashanayo kamarad noocan oo kale ah, waxay suurtogal noqon doontaa in si dhakhso ah loo qabsado daqiiqad dhalaalaya oo xaflad ah ama qorrax-dhac aan caadi ahayn oo qurux badan isla markiiba waxaad heleysaa sawir diyaarsan oo aad ku qurxin karto qol ama buug qosol leh.
Kamarad degdeg ah Fujifilm Instax Mini7c oo ka socota AliExpress, laga bilaabo 5 421 rubles →
Kamarada degdega ah Canon Zoemini C Bumble Bee, 6 999 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiibka haysta xayawaanka rabaayada ah
1. Qolka fadhiga ama guriga
Milkiilaha bisad ayaa hubaal ah inuu u mahadcelinayo guriga isaga, sababtoo ah xayawaanka xayawaanka ah waxay jecel yihiin inay ku dhuuntaan meelo qarsoon. Way fiicantahay haddii guriga sidoo kale ku qalabaysan yahay barta xoqidda. Hadiyaddan oo kale waxaa loo soo bandhigi karaa milkiilayaasha noocyada yaryar ee eeyaha. Waa hagaag, haddii saaxiib uu leeyahay xayawaan weyn, ka dibna soo bandhig sariir raaxo leh.
Guri leh sariir iyo boosteejo xoqan oo aan kaligii ahayn guriga, 3 650 rubles →
Sariir weyn oo laga keenay Tappi, 1 273 rubles →
2. Dharka sanadka cusub
Saaxiibka leh dareen kaftan dhab ahaantii ma diidi doono inuu u labbisto xayawaankeeda ay jeceshahay ee dharka Santa, deerada kirismaska ​​ama barafka. Waxa ugu muhiimsan waa in si dhow loo eego xayawaanka oo la qiyaaso xajmiga si aan loogu khaldin hadiyadda.
Dharka geedka kirismaska ​​​​ee AliExpress, 436 rubles →
Dharka Santa ee AliExpress, 442 rubles →
Gabadha bisadda iyo gabadha eyda labadaba, iyadoon loo eegin nooca xayawaanka, ma samayn karaan la'aanteed shanlo gaar ah. Furminator-ku wuxuu kaa caawinayaa inuu si fudud u shanlo timaha xad-dhaafka ah iyo inuu hagaajiyo jaakada dhogorta xayawaanka. Uma baahnid inaad u tagto dhaqtarka.
Furminator ee bisadaha iyo eeyaha ee noocyada yaryar ee FURminator, 300 rubles →
Furminator ee xayawaanka timaha dheer ee FURminator, 2 100 rubles →
4. Cabbista si toos ah
Qalab waxtar leh ayaa siin doona xayawaanka biyo nadiif ah maalintii oo dhan, halka mulkiiluhu aanu guriga joogin. Cabbitaanka tooska ah waxay ku yimaadaan awoodo kala duwan, dooro midka ku habboon iyadoo ku xiran xajmiga xayawaanka.
Makiinada cabitaanka tooska ah ee Aliexpress, laga bilaabo 1,327 rubles →
Khamriga tooska ah ee AliExpress, 2 307 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiib ku faraxsan inuu xirto qalabka
Sida hadiyadaha sanadka cusub, qurxinta jiilaalka-jiilaalka, tusaale ahaan, hilqado qaabka barafka nadiifka ah, geedaha kirismaska ​​ama barafka, ayaa ku habboon. Oo haddii aad rabto in saaxiibkaa uu awood u yeesho inuu xidho dahabka sanadka oo dhan, waa inaad si dhow u eegtaa qalabka adigoon ku xidhin mawduuc kasta.
Dhegaha qaabka barafka ee Sokolov, 1,000 rubles →
Dhagaha leh agate iyo malachites ee Sokolov, 4,000 rubles →
Kahor intaadan iibsan hadiyad, u fiirso waxa dahabka ah ee saaxiibkaa xiran yahay. Waxay noqon doontaa wax laga xishoodo in la soo bandhigo jijin maqaar ah oo jecel alaabooyinka laga sameeyay biraha qaaliga ah, ama in la soo bandhigo dahab jilicsan oo dhagaxyo ah oo gabar ah oo doorbidaysa qalabyo ballaaran oo aan lahayn waxyaabo dheeraad ah oo qurxinta.
Qayb ka mid ah afar gacmood oo AliExpress ah, 207 rubles →
Gacanka maqaarka ee Saint Laurent, 16 256 rubles →
Fiiro gaar ah u yeelo maro diirran oo ka samaysan cashmere, angora ama lagu daro dhogorta: qalab noocan oo kale ah ayaa hubaal ah inuu ku diiri doono xitaa cimilada ugu qabow. Oo haddii saaxiibkaa uu weli qabow yahay, sii maro leh kuleyl dheeri ah, oo uu ku shaqeeyo bangiga korontada.
Woolen wuxuu ka xaday Venera, 4 819 rubles →
Maro kulul oo leh AliExpress, 488 rubles →
4. Gacmo-gashi ama gacmo-gashiyo diiran
Waxaad ugu deeqi kartaa galoofyada si aad ugu shaqeyso shaashadaha taabashada si aysan u seegin wicitaanka ama aysan gacmaheeda ku xirin wadada. Iyo saaxiibka jecel qalabka quruxda badan ayaa hubaal ah inuu jecel yahay mittens leh weji xayawaan ama qaabab jilicsan.
galoofyada maqaarka ee lagu shaqeynayo shaashadaha taabashada ee Asos Design, 2 190 rubles →
Mittens-casaan ah oo leh dhogor faux ah oo ka yimid SVNX, 850 rubles →
Maxaa la siinayaa sanadka cusub saaxiib jecel inuu is daryeelo
1. dalool nadiifiye
Qalabkan yar ayaa kaa caawin doona inaad daryeesho maqaarkaaga oo aad nadiif iyo caafimaad u ahaato gurigaaga. Doorasho aad u fiican oo loogu talagalay kuwa jecel inay isdaryeelaan naftooda, laakiin waqti isku mid ah ma haystaan ​​​​waqti ku filan oo ay ku booqdaan qurxinta.
Nadiifiyaha daloolka ee AliExpress, 1 609 rubles →
Dabada nadiifiyaha ah ee Ronomo, 1 490 rubles →
Waxaa jira noocyo badan oo suuqa ah oo loogu talagalay duugista qaybaha kala duwan ee jirka: madaxa, wejiga, gacmaha, barida, lugaha, dhabarka. Hadyad ahaan, waxaad dooran kartaa qalab meel gaar ah, ama aan ku xaddidnayn tan oo aad iibsato duugista caalamiga ah.
Massager oo leh saameyn qaboojin ah oo loogu talagalay wejiga Kitsch, 1,390 rubles →
Maseerka caalamiga ah ee AliExpress, laga bilaabo 2,226 rubles →
3. Qalabka habaynta timaha
Tani waxay noqon kartaa bir tayo leh si loo abuuro curls iyo mowjado, ama bir lagu toosiyo xargaha. Oo haddii aadan rabin inaad doorato, sii multistyler. Qalabkani wuxuu isku daraa shaqooyinka dhowr qalab ee noocyada kala duwan ee habaynta.
Multistyler oo leh todobo nozzles oo ka yimid Rowenta, 2 999 rubles →
Qalab loogu talagalay abuurista saameynta jilbaha iyo hirarka Rowenta, 4 499 rubles →
4. Kareemada gacanta
Iyadoo hyaluronic acid, urea, glycerin, ama saliidaha nafaqada, way fiicantahay haddii kareemka la isticmaalo xilliga jiilaalka uu ka kooban yahay mid ka mid ah maaddooyinkan. Waxay nafaqeeyaan maqaarka gacmaha waxayna caawiyaan inay xajiyaan qoyaanka.
Kareemka gacanta oo leh hyaluronic acid laga bilaabo CeraVe, 442 rubles →
Kareemka gacanta oo leh saliid macadamiya iyo shea oo ka timid Aravia Professional, 614 rubles →
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 27 hadiyado aad u fiican saaxiib sanadka cusub!